कस्तो अचम्म एउटै श्रीमान एउटै मण्डपबाट बिहे गर्दै लक्ष्मी र सरस्वती , कारण थाहा पाउनु भयो भने पर्नु हुनेछ चकित ! – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/कस्तो अचम्म एउटै श्रीमान एउटै मण्डपबाट बिहे गर्दै लक्ष्मी र सरस्वती , कारण थाहा पाउनु भयो भने पर्नु हुनेछ चकित !
काठमाडौ। मानिसहरुका इच्छा पनि अचम्म अचम्मका हुन्छन कसैका कस्ता त कसैका कस्ता । कुनैकुनैका इच्छाहरु थाहा पाउदा त आफैलाई पनि लाज लाग्छ भने कुनैका थाहा पाउदा अचम्ममा पनि परिन्छ । हो आज हामी कुरा गर्दैछौ त्यस्तै अचम्मको इच्छा भएका २ २१ बर्षिय युवतीको बारेमा।
काठमाडौमा बस्ने यि २ युवतीको इच्छा थाहा पाउदा हामी सबै एकछिन अल्लमल्ल पनि पर्यो तर बिस्तारै बुझदै जादा यि २ सगै बस्ने र नातेदार भएकाले यस्ता कुरा गरिरहेका रैछन भन्ने लाग्यो । दैलेखका लक्ष्मी र सरस्वती शाही नाम गरेका युवती काठमाडौमा पढदै बिभिन्न कामहरु गर्छन खाली भएको समयमा । यि जति देख्दा राम्री र सुन्दरी छन त्यतिनै प्रतिभाबान पनि छन।
लक्ष्मी अहिले मोडलिङमा काम गरिरहेकी छिन भने सरस्वती गित गाउदै संघर्ष गर्दैछिन यस क्षेत्रमा लोक गित लगायत सबै बिधामा उतिकै रुची राख्ने यि २ जनाको कुरा गर्ने क्रममा एउटै श्रीमानसग बिहे गर्न तयार छम हामी भन्ने कुरा निकालेपछि हामी चकित पर्यौ । कारण सोध्दा झन अचम्म लाग्यो यो कसरी समभब छ भनेर तर बास्तबिकताले झनै झस्कायो, हेर्नुस त साथमा जादूमय स्वरका धनी यि युवती के भन्छन ? भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस।
‘ओली प्रचण्ड र देउवाले ९ अर्ब भ्रष्टाचार गरेको प्रमाण म संग छ’ : बाबुराम भट्टराई
कोरोना महामारी बढीरहेका बेला अनलाइन, रेडियो र टेलिभिजनबाट धमाधम पढाइ
यस्ता समस्या परेका व्यक्तिहरु मात्र विदेशबाट स्वदेश फर्कन सक्ने